Barcelona vs Juventus, PSG vs Man United – Isku Aadka – Axadle
Barcelona vs Juventus, PSG vs Man United – Isku Aadka
By Balaleti	 On Oct 1, 2020
Waxaa goor dhaweyd la sameeyay isku aadka wareega group-yada Champions League oo dhameystiran iyadoo ay ka soo baxeen kulamo xiiso badan.
Qori tuurka ayaa lagu qabtay magaalada Nyon ee dalka Switzerland halkaasoo xarun u ah xiriirka kubada cagta Yurub.
Kooxda difaacaneysa koobka ee Bayern Munich ayaa gashay group A iyadoo la ciyaareysa Atletico Madrid, FC Salzburg iyo Lokomotic Moskva.
Group-ka dhimashada waxa uu noqday Group H oo ay isku arkayaan kooxaha Paris Saint-Germain iyo Manchester United iyadoo ay wehliyaan kooxda soo gaartay wareega sideed dhamaadka Champions League xilli ciyaareedkii hore ee Bundesliga ka ciyaara RB Leipzig iyadoo ay dhameystireyo kooxda Turkiga ee Istanbul Basaksehir
Sidoo kale waxaa iyadana xiiso leh Group H iyadoo ay kuwada jiraan kooxaha Barcelona iyo Juventus, waana group ay isaga horimaan doonaan mar kale xiddigaha xafiiltanka uu ka dhaxeeyo ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, waxaa ku wehlisa group-ka kooxda Dynamo Kiev iyo kooxda reer Hungary ee Ferencvaros.
Marka laga reebo Man United kooxaha kale ee Ingariiska ayaa galay group-yo sahlan ama ay u fududahay inay ka soo baxaan. Chelsea waxay la ciyaareysaa Sevilla iyo labo kooxood oo markii ugu horeysay ciyaaraya wareega group-yada oo kala ah Rennes iyo Krasnodar.
Man City waxay isku group yihiin kooxo heer dhexaad ah oo kala ah FC Porto, Marseille iyo Olympiacos. Halka Liverpool ay tahay kooxda labaad ee kulamo adag wajihi karta kooxaha Ingariiska waxay isku group yihiin Ajax iyo Atalanta iyo kooxda reer Denmark ee Midtjylland.
Halkaan ka akhriso isku aadka oo dhameystiran:
Group C: Porto, Man City, Oympiacos, Marseille
Wareega group-yada waxaa la ciyaari doonaa laga bilaabo 20ka bishaan October iyadoo maalinta Jimcaha la shaacin doono jadwalka rasmiga ah ee kulamada wareega group-yada.